အောင်နိုင်၊ ဒေါက်တာ, ဆေးသု - ဆေးများ. ၁။ အမည်ရင်း - ဦးအော
အောင်နိုင်၊ ဒေါက်တာ, ဆေးသု - ဆေးများ. ၁။ အမည်ရင်း - ဦးအောင်နိုင် ၂။ မိဘအမည် - ဦးထွန်းအောင် + ဒေါ်ရင်မေ ၃။ မွေးသက္ဗရာဇ် - ၂၃၊ ၈၊ ၁၉၄၈ ၄။ မွေးဖွားရာဒေသ - ရန်ကု ..
အောင်နိုင်၊ ဒေါက်တာ (ဆေး/သု), ဆေးများ. အောင်နိုင်၊ ဒေါက်တာ (ဆေး/သု),